တောင်တွင်းကြီးမြို့ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှုတွင် ဗို့အား တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေး ဆောင်ရွက်လျက်?? - Yangon Media Group
တောင်တွင်းကြီးမြို့ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှုတွင် ဗို့အား တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေး ဆောင်ရွက်လျက်??
အဆိုပါ မီးကြိုးများလဲလှယ် ခြင်း၊ ထရန်စဖော်မာများ တိုးချဲ့ တည်ဆောက်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှစတင်၍ ယနေ့အချိန်ထိဆောင် ရွက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် တောင်တွင်းကြီးမြို့ပေါ် ရပ်ကွက်များအတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဗို့အားပြည့်မီစွာ အသုံးချနိုင်ရေးအတွက် ၁၁ ကေဗွီဓာတ်အားလိုင်း ရှိ ကြိုးအသေးများအား ကြိုးဆိုက်အကြီးဖြင့် ၅ ဒသမ ၅ မိုင် လဲလှယ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး 11/0.4 KV ထရန်စဖော်မာများ တိုးချဲ့ တည်ဆောက်ပေးခြင်းနှင့် ၄ဝဝ ဗို့ ဓာတ်အားလိုင်းများ တိုးချဲ့တည် ဆောက်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
”၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။ မီးကြိုးလဲလှယ်တာနဲ့ ထရန်စဖော် မာတည်ဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းကို မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များမှာ နေ့စဉ် တစ်လှည့်စီဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ တောင်တွင်းကြီးခွဲရုံကနေ နတ် မောက်၊ မြို့သစ်အတူသုံးနေရလို့ မိန်းထရန်စဖော်မာကိုလည်း အသစ်လဲလှယ်သွားမှာပါ”ဟု မြို့ နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ ဦးဝင်း နိုင်ဦးက ပြောသည်။ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၊ မြို့ သစ်မြို့နယ်နှင့် နတ်မောက်မြို့နယ်များအတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အသုံးပြုမှု ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာသည့်အတွက် ယခင် 66/11 KV,(10) MVA မိန်းထရန်စဖော်မာဝန်အား ပြည့်နေ၍ 66/11KV,(20)MVA ထရန်စဖော်မာနှင့် အစားထိုးလဲ လှယ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။